Amathikithi esitimela eshibhile e-SNCB Nezintengo Zokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi esitimela eshibhile e-SNCB Nezintengo Zokuhamba
Ikhaya > Amathikithi esitimela eshibhile e-SNCB Nezintengo Zokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana Amathikithi esitimela eshibhile eSNCB futhi Izintengo zokuhamba ze-SNCB nezinzuzo.
Izihloko: 1. I-SNCB nge-Train Highlights
2. Mayelana ne-SNCB 3. Imininingwane Ephezulu Yokuthola Ithikithi Lesitimela Elishibhile le-SNCB
4. Abiza malini amathikithi e-SNCB 5. Kungani kungcono ukuthatha izitimela zeSNCB, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kwesigaba sokuqala nesesibili? 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-SNCB
8. Kufika isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba i-SNCB ifike 9. Luyini uhlelo lwezikhathi lwesitimela seSNCB
10. Yiziphi iziteshi ezinikezwa yi-SNCB 11. Imibuzo Evame Ukubuzwa SNCB
I-SNCB nge-Train Highlights
Inkampani yezitimela kazwelonke, I-SNCB, ukhonza 244 abagibeli abayizigidi ngonyaka.
Nsuku zonke, inkampani yezitimela kazwelonke ithatha 61 abantu abayizinkulungwane ngaphakathi kweBelgium nasezindaweni abaya kuzo kulo lonke elaseYurophu.
Inkampani kazwelonke yezitimela ingumhlinzeki omkhulu wokuhambisa izinsiza eBelgium ezweni.
Inkampani yezitimela kaZwelonke yaseBelgium, I-SNCB, yasungulwa ngo 1926.
Ukunikezwa kwe-SNCB izinsizakalo zesitimela ngaphakathi eBelgium nakulo lonke elaseYurophu. Ngethikithi elifanele, ungavakashela konke okuhle kakhulu izindawo zamaholide eYurophu. Ngezigaba ezahlukahlukene zamathikithi nokubhaliswa kwamakhadi, I-SNCB ibhekelela izidingo zawo wonke umuntu.
Izitimela zivame ukufika eBrussels – yaseGhent, I-Antwerp – esetshenziswa, EBrussels – I-Namur. Ungafika nasemazweni angomakhelwane aseYurophu usebenzisa izitimela zeSNCB.
Ngaphesheya kwenhlangano, duze kwe 20,000 abasebenzi abasebenza kojantshi bezitimela namabhasi baqinisekisa ukuthi abagibeli bafinyelela ngokuphepha lapho beya khona nsuku zonke.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi eSNCB
– Gcina Isitimela iPhone iOS App
Imininingwane Ephezulu Yokuthola Ithikithi Lesitimela Elishibhile le-SNCB
inombolo 1: Oda amathikithi akho e-SNCB kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Intengo ye Amathikithi wesitimela e-SNCB kuphakama njengoba usuku lokuhamba lusondela. Ungazigcinela imali ngokubhuka amathikithi akho wesitimela e-SNCB kude ngangokunokwenzeka kusukela ngosuku lokuhamba. Amathikithi esitimela e-SNCB ayatholakala kusenesikhathi 3 ukuze 6 izinyanga ngaphambi kokusuka kwesitimela. Ukubhuka kusenesikhathi kuqinisekisa ukuthi uthola amathikithi wesitimela eSNCB angabizi kakhulu. Zilinganiselwe ngenani, ngakho-ke ngokushesha uyala, okushibhile kuwe. Ukonga imali kumathikithi esitimela e-SNCB, thenga amathikithi akho ASAP.
inombolo 2: Ukuhamba nge-SNCB ngezikhathi ezingekho ngaphezulu
Amathikithi esitimela e-SNCB ashibhile ngezikhathi zokufika kwephakeme, ekuqaleni kwesonto, naphakathi nesikhathi sasemini. Ungaqiniseka ukuthola athenge amathikithi esitimela ngemali eshibhile phakathi nesonto. Ngolwesibili, NgoLwesithathu, nangoLwesine, Amathikithi esitimela e-SNCB angonga kakhulu. Ngenxa yevolumu yabahambi bebhizinisi abaqala ukusebenza ekuseni nakusihlwa, amathikithi esitimela abiza kakhulu ngalezo zikhathi. Kushibhile kakhulu ukuhamba nganoma yisiphi isikhathi phakathi kokusa ekuseni nangaphambi kokuhamba kusihlwa. Impelaviki kungenye yezikhathi eziphakeme zezitimela, ikakhulukazi ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Izintengo zamathikithi esitimela e-SNCB nazo ziyenyuka ku amaholide omphakathi namaholide esikole.
inombolo 3: Oda amathikithi akho e-SNCB uma uqinisekile ngohlelo lwakho lokuhamba
Izitimela zeSNCB zifunwa kakhulu, futhi ngokuncintisana okuncane, njengamanje zihlala ziyizinketho eziphezulu zezitimela eBelgium. I-SNCB ingakwazi ukusetha imikhawulo yamathikithi esitimela njengaleyo enqabela ukushintshaniswa kwamathikithi noma ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuthi kunguhlobo lwebhizinisi lwethikithi. Noma kusekhona amawebhusayithi wesithangami lapho ungathengisela khona amathikithi akho amasekeni, I-SNCB ayikuvumeli ukuthengiswa kwamathikithi angamasekeni. Lokhu kukusiza kanjani ukonga imali? Oda ithikithi lakho kuphela uma uqiniseka ukuthi uhlelo lwakho luzokusindisa ekubhukeni ithikithi elilodwa kabili ngoba kukhona okuqhamile futhi awukwazi ukusebenzisa ithikithi lokuqala.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho e-SNCB ku-Save A Train
Gcina isitimela kukhulu kunakho konke, okuncono, namadili ashibhile kakhulu amathikithi wesitimela eYurophu. Ubudlelwano bethu nabashayeli bezitimela abaningi, imithombo yamathikithi esitimela, futhi ulwazi lwethu ngobuchwepheshe ubuchule ukunikeza Gcina A Isitimela ukufinyelela eshibhe ithikithi isitimela amadili. Asinikezi amadili wamathikithi esitimela ashibhile eSNCB kuphela; sihlinzeka okufanayo nangezinye izindlela ze-SNCB futhi siyaziqhenya ngokuhlinzeka ngamakhasimende okuhle kakhulu emakethe yezitimela.
Amanani entengo aseBrussels aya e-Antwerp
Amanani ase-Amsterdam aya e-Antwerp
I-Lille iye e-Antwerp amanani entengo
Amanani entengo eParis aya e-Antwerp
Abiza malini amathikithi e-SNCB?
Amathikithi e-SNCB aqala kusuka ku- € 2,5 aze afike ku- € 20 ngohambo olulodwa lwesitimela. I Intengo yethikithi lesitimela leSNCB kuya ngokuthi hlobo luni lwethikithi olithengayo nokuthi ukhetha ukuhamba nini:
Okujwayelekile € 2,50 – € 15.00 € 15 – € 30
Isigaba sokuqala € 10.50 – € 20 € 21 – € 46
Kungani kungcono ukuthatha izitimela zeSNCB, futhi ungahambi ngendiza
1) Ufika eCity Center. Lokhu kungenye yezitimela zeSNCB uma kuqhathaniswa nezindiza. Izitimela zeSNCB kanye konke okunye ukuhamba ngesitimela kusuka noma yikuphi ku idolobha enkabeni lomuzi olandelayo. Kuyakongela isikhathi kanye nezindleko ze-cab kusuka esikhumulweni sezindiza ukuya enkabeni yedolobha. Ngezitimela, Kulula ukufika kunoma yiliphi idolobha oqonde kulo. Akukhathalekile ukuthi usukaphi, EBrussels, I-Antwerp, esetshenziswa, noma eLiege, Izikhungo zamadolobha ziyinzuzo enkulu yezitimela zeSNCB!
2) Ukuhamba ngezindiza kudinga ukuthi ube esikhumulweni sezindiza okungenani amahora ambalwa ngaphambi kwesikhathi sakho sendiza. Kuzofanela ukuthi uhlole amasheke wokuphepha ngaphambi kokuvunyelwa ukugibela indiza. Ngezitimela ze-SNCB, kufanele ube esiteshini ngaphansi kuka 30 imizuzu kusengaphambili. Lapho futhi ubheka isikhathi okuthatha ngaso ukusuka esikhumulweni sezindiza uye enkabeni yedolobha, uzobona ukuthi izitimela ze-SNCB zingcono ngokuya nge- isikhathi sokuhamba esiphelele.
3) Ebusweni, Intengo yamathikithi esitimela e-SNCB ibonakala ibiza kakhulu kunamathikithi womoya wesabelomali. Nokho, lapho uqhathanisa wonke amacala abandakanyekile, Amathikithi esitimela e-SNCB anesivumelwano sentengo esingcono. Ngezinye izindleko ezinjengezindleko zemithwalo okungafanele uzikhokhele ezitimeleni, ukuhamba nge-SNCB nakanjani okungcono kakhulu.
4) Izitimela zinobungane ngokwengeziwe uma uqhathanisa izitimela nezindiza, izitimela bezizophuma zibheke phezulu. Izindiza ziyangcolisa kakhulu umkhathi ngamazinga aphezulu ekhabhoni awanikezayo. Izitimela ngokuqhathanisa zinikeza okuningi ukungcola okungaphansi kwekhabhoni kunezindiza.
Brussels ukuze Bruges Izitimela
E-Antwerp liye Bruges Izitimela
Halle ezimbili Bruges Izitimela
YaseGhent ukuze Bruges Izitimela
Uyini umehluko phakathi kwesigaba sokuqala nesesibili?
Kunezigaba ezahlukahlukene zamathikithi e-SNCB ezabelomali ezahlukahlukene nezinhlobo zabahambi. Ungathenga ithikithi elijwayelekile lekilasi lokuqala noma lesibili. Ngokwesibonelo, isigaba se-2 sizohambisana kangcono nohambo olude futhi isabelomali abahambi. Kepha uma ufuna indawo yokwelula imilenze yakho noma uyi ohamba ngezebhizinisi futhi ngifuna ukusebenza ngenkathi usohambweni, ke ikilasi lokuqala lilungele wena.
Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-SNCB?
Izakhamizi zaseBelgium, kunezinhlobo ezahlukene zokubhaliselwe, ithikithi lesikhathi esingenamkhawulo, neSizini Ejwayelekile. Okwamazwe omhlaba siphakamisa ukuthi kuthengwe isikhathi eside ngaphambi kwesikhathi bese uba nenketho eshibhile.
Womabili amakhadi angathengwa ku-:
– Izibali zamathikithi e-SNCB.
– Uhlelo lokusebenza lwe-SNCB.
Amathikithi ajwayelekile e-SNCB:
Ithikithi elijwayelekile yithikithi lesitimela eliguquguquka kakhulu elinikezwa yi-SNCB. Ngakho, ungahamba noma yikuphi eBelgium ngethikithi elijwayelekile lesitimela. Kufanele wazi ukuthi amathikithi ajwayelekile athengwe online, ayikwazi ukubuyiselwa imali. Nokho, uma kube noshintsho ezinhlelweni, ungabuyisa imali noma ushintshe ithikithi ezincwadini zamathikithi. Ngaphezu kwalokho, le sevisi iyatholakala, usuku ngaphambi kosuku lwakho lokuhamba, noma i- 30 imizuzu ngemuva kokuthenga ithikithi.
Ithikithi Elikhulu Lomndeni
Onke amalungu omndeni angajabulela izaphulelo ezinhle kumathikithi e-SNCB. Ngokwesibonelo, izingane ezingaphansi 12 ukuhamba mahhala, futhi kuze kube 50% kumathikithi ajwayelekile abantu abadala nezingane ngaphezulu 12. Ngaphezu kwalokho, ngaleli thikithi, ungahamba kuzo zonke izitimela ze-SNCB.
Leli khadi lisebenza ngokuhambisana nekhadi lokuhlonza isithombe, okufanele ifake iminyaka yobamba.
Ithikithi Lesizini Esijwayelekile
Izakhamizi zaseBelgium zingathenga iThikithi Lesikhathi Esijwayelekile, futhi ujabulele uhambo olungenamkhawulo emzileni ofanayo. Ngamanye amazwi, ngentengo ye- 10 ukubhaliswa kwezinyanga, bangahamba ngezindlela zombili izikhathi eziningi njengoba befuna.
Ithikithi lempelasonto livumelekile ngoLwesihlanu nangeSonto, nge 50% isaphulelo kunoma yikuphi ukufika eBelgium. Ngakho, ukuqala ngo- 7 ntambama ngoLwesihlanu, ungahamba noma yikuphi eBelgium, ekilasini le-1 noma le-2. Ngaphezu kwalokho, lawa magama akhethekile adlulela ku iholidi yomphakathi kanjalo.
Amanani aseBrussels aya eGhent
I-Antwerp kuya eGhent amanani entengo
IHalle kuya eGhent Izintengo Zesitimela
Ama-Bruges entengo yeGhent Train
Kufika isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba i-SNCB ifike?
Kunzima ngokunemba ngokunembile, kodwa Gcina Isitimela weluleka ukuthi ufika mayelana 30 imizuzu ngaphambi kwesikhathi sakho sokuhamba. Ngalesi sikhathi esinqunyiwe, uzoba nesikhathi esanele sokuthenga izinto ozidingayo yenza uhambo lwakho lwesitimela ngokunethezeka ngangokunokwenzeka.
Luyini uhlelo lwezikhathi lwesitimela seSNCB?
Ungathola ngesikhathi sangempela ekhasini lethu eliyisiqalo ku Londoloza Isitimela Uhlelo lwezikhathi lweSNCB Train, Mane uthayiphe indawo yakho yamanje nendawo oyifunayo, futhi sizokukhombisa imininingwane.
Amanani aseBrussels ukuya eLiege Train
I-Antwerp kumanani entengo eDinant
I-Ghent kumanani entengo yesitimela
Liege ukuze Dinant Izitimela Amanani
Yiziphi iziteshi ezinikezwa yi-SNCB?
Isiteshi saseBrussels seSNCB yiBrussels – Central, etholakala enhliziyweni yeBelgium.
Esinye isiteshi esimaphakathi se-SNCB sise-Antwerp, Izitimela zeSNCB hamba futhi ufike usuka e-Antwerp Central Station, eduze nehhotela elihle iBlue Astrid. I-Antwerp Central yiyona isiteshi sesibili sesitimela esimatasa kakhulu eBelgium.
Izitimela ze-SNCB zisuka eGhent zisuka e- IGhent Saint Pieters esiteshini, okuyidolobha lesithathu ngobukhulu eBelgium futhi elikhulu kunawo wonke eFlanders.
Liege, Liege IGuillemins yisiteshi sesitimela esiphakathi seSNCB. Ngakho-ke, Isiteshi sesitimela iLiege sixhuma iBelgium emazweni angomakhelwane, okwenza kube ngesinye seziteshi zesitimela esimatasa kakhulu eWallonia. Ngaphezu kwalokho, uma uhlela ukuya eJalimane, France, E-Luxembourg, noma iNetherlands evela eBelgium, kungcono ubeke amathikithi wakho wesitimela e-SNCB kusenesikhathi.
esetshenziswa (I-Brugge – Igama ledolobha elifanayo kolunye ulimi oludumile) isiteshi sesitimela singesinye sezitimela ze-SNCB ezimatasa eFlanders. Ngokwesibonelo, kusuka eBruges, ungakwazi oda ithikithi lakho isitimela kwamanye izindawo athandwayo eBelgium: yaseGhent, I-Antwerp, naseBrussels esikhathini esingaphansi kwehora. Isiteshi sesitimela saseBruges sise- 20 imizuzu yokuhamba ibanga ukusuka e- enkabeni yedolobha, nesikwele esihle se-Old City Markt.
Isiteshi sesitimela se-SNCB eLeuven isiteshi esikhulu sesitimela esifundeni saseFlemish Brabant eBelgium. Lesi siteshi sesitimela esimatasa sixhuma isifunda saseFlemish nezinye izifunda futhi singesinye seziphezulu 5 Iziteshi zezitimela ezimatasa kakhulu eBelgium. Ngakho, ungakwazi travel isitimela Brussels, Isikhumulo sezindiza saseBrussels, Leuven, I-Antwerp, futhi ngokuyisisekelo noma yiliphi idolobha laseBelgium.
UMechelen noma uMalinas, edolobheni laseMechelen, singesinye seziteshi zesitimela esiphakathi neSNCB eBelgium. Uzothola lapha 10 amapulatifomu, ukukhonza ulayini wesitimela se-Intercity, kufaka phakathi isikhumulo sezindiza iBrussels kusuka e-Antwerp. Ngaphezu kwalokho, ungathenga amathikithi akho e-SNCB aya e-Amsterdam, futhi Luxembourg, nge-Antwerp naseBrussels.
Imibuzo Evame Ukubuzwa SNCB
Ingabe Amabhayithi Avumelekile Ebhodini Izitimela ze-SNCB?
Amabhayisikili avunyelwe ezitimeleni ze-SNCB. Uma unebhayisikili eligoqekayo, lapho-ke ungakugibela esitimeleni, mahhala. Nokho, ezinye izinhlobo zamabhayisikili zizokubiza isengezo esingu- € 4 kwithikithi lakho lesitimela.
Ngabe Izingane Zihamba Khulula Ezitimeleni zeSNCB?
Yebo, kepha kuze kufike eminyakeni ethile. Izingane ezingaphansi kweminyaka yobudala ye- 12 izohamba mahhala uma ihamba nomgibeli omdala.
Ingabe Izilwane Ezifuywayo Zivunyelwe Ezitimeleni ze-SNCB?
Yebo, ungaletha isilwane sakho esitimeleni, ngo- € 3 ngohambo ngalunye. Nokho, isilwane kufanele sibe semholweni noma esikhwameni, noma ibhasikidi.
Yiziphi izinqubo zokugibela zeSNCB?
Ezinye iziteshi zinemibukiso ekhombisa ukwakheka kwezitimela. Ngaphezu kwalokho, sebenzisa lezi ukubheka izindawo lapho kuzoba khona inombolo yomqeqeshi wesitimela lapho kuza isitimela.
Imibuzo Evame Ukubuzwa yeSNCB – Ngabe kufanele ngi-oda isihlalo kusengaphambili ku-SNCB?
Wena kungaba gcina a ngiyazingesikhathi ngaphambili kwezasekhaya I-SNCB izitimela. Wena kuthanda uthole okwakho isihlalo ngemuva kokubhuka, kepha lokhu akusikho isidingo.
Ingabe ikhona i-inthanethi ye-Wi-Fi ngaphakathi kwe-SNCB?
Ayikho. Akekho Mahhala I-Wi-Fi i-inthanethi ezitimeleni ze-SNCB. Ungajabulela i-Wi-Fi yamahhala eziteshini zezitimela ze-SNCB.
Uma ufundile kuze kube manje, manje usuyakwazi konke odinga ukukwazi ngezitimela zakho ze-SNCB futhi ukulungele ukuthenga ithikithi lakho lesitimela le-SNCB Londoloza Isitimela.
I-NSB Vy Norway I-SBB Switzerland
I-SNCF TGV I-Trenitalia
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml futhi ungashintsha i- / fr to / nl noma / es nezilimi eziningi.